Ogaden News Agency (ONA) – Dhagayso: Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo ESAT Radyo la yeeshay mudane Cabdullahu Xuseen.
Dhagayso: Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo ESAT Radyo la yeeshay mudane Cabdullahu Xuseen.
ESAT Radyo ayaa waxa u waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay mudane Cabdullahi Xuseen.
Wariyaha ayaa waxa u ku bilaabay hordh u kaga sheekaynayo dhibaatooyinka u taliska Woyanahu u gaystay shacabka Soomalida Ogaadenya.
Waraysigan ayaa waxa diirada lagu saaray mudaharaadyadan ay qaar ka mid ah shacbka Soomalida Ogaadenya ugu mudaharaadayaan dawlada Woyanaha ee gabalkiisii dhacay.
Mudane Cabdullahu Xuseen ayaa waxa u sheegay in shaqsiyaadkan mudaharaadaya aysan matalin shacbka Soomalida Ogaadenya, shacabka Soomalida Ogaadenyana ay arrintan aad uga xumaadeen.
Waxaa jirtay ayu yidhi in ay xukuumada TPLF doonaysay in ay iska hor keento qoomiyadaha Oromoda & Axmaarada si ay cimri dherer uga helaan khilaafkaas.
Hasayeshe waxaad moodaa in ay hadda Cabdi iley u isticmaalayaan sidii ay isaga hor keeni lahayeen shacabka oo ay ku dhaceen dabinkii ay gumaysiga Itoobiya ay la rabeen.
Waxa u mudane Cabdullahi ku daray in ay wax walba suurto gal u tahay in u Cabdi Iley sameeyo isla markaan usan jirin wax u tix galiyo ama u ka xishoodo.
Haddii aan xaaladan hadda taagan u soo noqon ururka TPLF yaa waxay isticmaalayaan Cabdi Iley iyaga oo Probagandho u adeegsanaya in ay shucuubta Itoobiya u tusaan in ay shacbka Soomalida Ogaadenya ay garab taaganyihiin dawlada Woyanaha, taas oo xaqiiqada ka fog.
Arrintanina kuma eka oo kaliya shacabka Soomalida Ogaadenya oo kaliya e waxaa jirtay in Madaxwayanah Soomaaliya loogu yeedhay Jigjiga si loogu tuso shuucbta Itoobiya in ay xataa dawlada Soomaaliya ay taageersanyihiin dawlada Tigrega.
Waxa u wariyuhu waydiiyay mudane Cabdulahi waxa u ku dhashay Cabdi Ilye Soomaaliya, mudane Cabdullahu waxa u ugu jawaabay in Cabdi Ilye ku dhashay magaalada Dhagaxbuur oo u laydhka ka shaqayn jiray, markii danbana u askarta & sirdoonka ciidamada mudo badan la soo shaqeeyay.
Hoos ka dhagayso waraysigii oo dhamaystiran.